Fri, Aug 07, 2020 | 17:39:00 NST
मेरो घर उदयपुर हो। म साउदी आएको ११ महिना भयो। काठमाडौंको चप्पल कारखाना नजिकै रहेको इन्टरनेसनल जब कनेक्शन नामक म्यानपावर द्वारा हेभी भेइकल ड्राइभरमा आएको थिए। तर यहाँ त सानो गाडी मात्र छ। यसको बारेमा म्यानपावरको मान्छेलाई जानकारी गराउँदा २, ३ महिना पछि ठूलो गाडी दिन्छ भन्यो। त्यस पछि फोन उठाउनै छाड्यो। ड्युटी पनि भनेको भन्दा धेरै गर्नुपरेको छ। ओभरटाइम गर्नको लागि कम्पनी भित्र लेबर काम गर्नु परिरहेको छ। पैसा पनि १ लाख २० हजार तिरेकोमा २० हजारमा मात्र हस्ताक्षर गराएको छ। यसरी दलाल मार्फत हामी बेचिन बाध्य छौं।
उद्धब राउत / साउदी (इमेल)
म कतारबाट राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बचत पत्र किन्न कोशिष गरिरहेको छु । यसबारेमा बुझ्न खोज्दा न दूतावासवासको फोन उठ्छ, न त राष्ट्र बैंकले इमेलको जवाफ दिन्छ । बचत पत्र किन्ने प्रक्रिया सरल बनाए म ठोकुवा गरेर भन्छु, विदेशमा भएका लाखौं नेपालीले बचतपत्र किन्छन् । किन्न आएनन भन्नु भन्दा सुधार गर्न लागे राम्रो हुन्छ, राष्ट्र बैंकलाई मेरो सुझाव ।
अञ्जु खड्का सुवेदी /कतार
देश परदेश मलाई धेरै राम्रो लाग्छ । बिषेश गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समस्या अनी भोगाईहरु समेटेर तयार पारेको यो कार्यक्रमले मन छुन सफल भएको छ ।
लेखु मगर/ नवलपरासी (इमेल)
सेल्युट छ सर्बेन्द्र खनालजीलाई बल्ल नेपाली युवा ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कारवाही चलाउनु भएकोमा । यसरिनै जनताको मनमुटु, भावना र मर्म बुझेर जनताको हितमा अगि बड्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
तिर्थ बुढाथोकी / दोहा, कतार
पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङ ज्यूको पालामा नै यी व्यवसायीलाई जेल हाल्नुपर्थ्यो । तर भाग्यवश त्यतिबेला उम्किए । गरिबको घरबार उजाड गर्ने, सोझासाझाको पैसाखाने, ७० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि लिएर १० हजारको मात्र रसिद दिने उनीहरुलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ । त्यसरी विदेश आएका हामीले कुनै सेवा-सुबिधविना काम गर्नुपर्छ । यहाँ काम गर्दा यतै मरिन्छ र परिवारलाई भेटिन्न जस्तो लाग्छ । नेपाल प्रहरीले यिनीहरुलाई कुनै पनि आन्दोलनको नाममा र कसैको दवावमा नछाड्नुहोला । अब विदेश आउनेहरुलाई सरकारले नै पठाए हामी विदेशमा बस्नेलाई सकुशल घर फर्किने आशा हुनेछ ।
सोचे जति यथार्त हुदैन । जसमा धेरै कारणहरु छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तीहरु दक्ष नहुनु । सरकारले रोजगार मुलुकसँग गरेको श्रम सम्झौत्ता फितलो हुनु । म्यानपावरको लापरवाही र हामी बढी पैसा कमाउने प्रलोभनमा परि हचुवाको भरमा असुरक्षित ठाँउ वा कम्पनीमा जानाले गर्दा दुख पाईरहेका छौं ।
ओम कार्की / मोरङ (हाल दोहा)
म मलेसियामा कार्यरत छु । नेपाली कामदारहरु यहाँ निकै दयनीय अवस्थामा छन् । रातमा सुत्न र दिनमा बाहिर निस्कन नि डरमर्दो छ । ज्यानै जाने डर छ । तामिलले भेट्यो भने लुटपाट र कुटपीट गर्छन । प्रहरीले पनी लुट्ने काम नै गर्छ । आफुसँग भएको सबै पैसा माग्छ नत्र जेल लान्छु भन्छ । त्यसैले नेपाली मलेसियामा नल्याउने घोषणा नै राम्रो छ ।
सन्तोष लिम्बु /मलेसिया (इमेल)
म लगायत झण्डै सय जना नेपाली मलेसियाको KL Supreme Poultry Sdn Bhd मा काम गर्छौ । हामीलाई कम्पनीले भिसा परमिट एक ठाँउको दिन्छ । काम भने अर्कै ठाँउमा लगाउने गरेको छ । यसरी काम गर्दैनौ भन्दा नेपाल फर्काउछु, ४/५ हजार रिंगिट लाग्छ भन्छ । हामीलाई केहि सुविधा छैन । मासिक तलब पनि दिदैन । दैनिक ज्यलादारी जस्तै हो । काम गरेको दिनको मात्रै पैसा आउछ । बिमारी हुदा पनि कम्पनीले केही हेर्दैन । उल्टै काममा गएन भने काम गरेको दिनको पैसा काट्छ । अनि अहिलेको नयाँ समस्या चाहिँ इमिग्रेसनले छापा मारिरहेको छ । हामी धेरैको भिसामा उल्लेखित काम र ठाउँ मिल्दैन । भेटिहाले समाएर लैजान्छ । कम्पनीले केहि खोजखबर गर्दैन । आफैले पैसा तिरेर आउनु पर्छ । यस्तो समस्या ५/६ जनालाई परिसक्यो । नेपालबाट कोहि यो कम्पनीमा आउदै हुनुहुन्छ भने नआए हुन्छ ।
रमेस दाहाल / मलेसिया
बेरोजगार हुनुको पीडा अलग छ तर यही पीडामा शोषण गर्न पल्केका दलालहरुले १० हजार रुपैयाँ लागतको रसिद काटेर अझैपनि खुलेआम रुपमा लाखौं रुपैयाँ असुली गर्ने प्राय निश्चित छ । सरकारले बेरोजगारहरुको यो पीडा अनि मेनपावर व्यवसायीहरुको यो चातुर्यतालाई बेलैमा नबुझ्ने हो भने स्थिती अझ भयावह हुने प्रष्ट देखिन्छ । पासपोर्ट बनाउने बेला देखि लुटिन थालेको नेपाली युवा विदेश आईपुग्दा सम्म लुटिने समस्याको अन्त्य कहिले होला र खै ?
नबराज नबोदित लेगुवा / धनकुटा (हाल अबुधाबी , युएई)
अप्ठेरो पर्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै नेपाली कामदार विदेशमा अवैधानिक बन्नमा सबैको दोष छ । सही सरकारि नीति नहुनु, कामदारलाई कामको बारेमा ज्ञान नहुनु, म्यानपावरले चिल्लो कुरा गरेर कामदार पठाउनु, कम्पनीले समयमा तलब नदिनु, म्यानपावरले धेरै पैसा लिनु, भनेको जस्तो सेवा सुविधा नपाउनु । अनि अरु के चाहियो र ?
मेरो साथी २ बर्ष अघि बैधानिक तरीकाले युएई आएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ घर बिदामा नेपाल जानु भयो र घरायसी कारणले युएई फर्कनु भएन । केहि महिना पछि उहाँ वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा कतार जानुभयो । केहि दिन अधि कतारबाट घर बिदामा फर्किदा उहाँको ट्रान्जिट आबुधाबी/युएई पर्यो। युएईको पहिलाको भिसा रद्ध नगरेकाले उहाँ पक्राउ पर्नु भयो । साथसाथै उहाँले जरीवाना समेत तिर्नु पर्ने छ । अहिले उहाँ जरीवाना भुक्तान गर्ने रकमको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ । अन्तराष्ट्रीय कानुनको ज्ञान नहुदा यसरी नै समस्यामा पर्न सकिन्छ । त्यसैले सबैलाई सचेत रहन अनुरोध गर्दछु ।
राजु भण्डारी आबुधाबी/युएई (इमेल)
मेरो समस्या भन्नु पर्दा म मलेसिया आएको १८ महिना भयो । हाल म रेड फोर्स सेक्युरिटी सर्भिसेज (Redforce Security Services Sdn Bhd) कम्पनीमा काम गर्छु । तर बिगत ५ महिना देखि कम्पनीले कुनै काम दिएको छैन । म सहित २० जना अलपत्र रुपमा बसिराको छौं । कम्पनीसंग घर जानलाई पासपोर्ट माग्दा पनि दिदैन । यो रेड फोर्स सेक्युरिटी सर्भिसेजको भिसा नेपालको बुद्ध भीजन मेनपावर (Buddha Vision Overseas Pvt. Ltd.) र वल्ड्रवाइड मेनपावर (Worldwide Human Resource Networking Pvt. Ltd) मा गएकोछ भन्ने सुनेको छु त्यसैले यो कम्पनीमा नआउनु होला ।
रोहन थापा / मलेसिया (इमेल)